UGoretti Irisarri noJose Gil Romero. Ingxoxo nababhali beLa traductora | Izincwadi Zamanje
UGoretti Irisarri noJose Gil Romero. Ukuxoxisana nabalobi beLa traductora
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Izingxoxo, Abalobi, Amabhuku
Iphrofayili yababhali be-Twitter.
UGoretti Irisarri noJose Gil Romero Bebeyizithandani zokudala iminyaka engaphezu kwamashumi amabili futhi bashicilele izihloko ezinjenge-trilogy Bonke abangasekho (yenziwe nge Izinkanyezi zokudubula ziyawa, The Mechanism of Secrets neThe Enclosed City), Ngokwesibonelo. Umhumushi Yinoveli yakhe yakamuva kanti isanda kuphuma kule nyanga. Nginibonga kakhulu isikhathi sakho nomusa ukunginikela le ngxoxo yezandla ezimbili nokukhombisa ukuthi benza kahle impela.
UGoretti Irisarri noJose Gil Romero - Ingxoxo
UMBHALO MANJE: Umhumushi yinoveli yakho entsha. Usitshelani ngakho futhi umqondo wavelaphi?
JOSE GIL ROMERO: Izinganekwane zenoveli no yini engenzeka ekubambezelweni kwemizuzu eyisishiyagalombili ngawo Isitimela sikaFranco bafika ukuhlangana no-hitler eHendaye. Kusukela kulowo mcimbi wangempela sakha i- Indaba yothando nokusola, kudlala umhumushi, owesifazane ongenasibindi, ofuna ukuhlala ngokuthula kuphela, futhi obambe iqhaza kutulo lobunhloli.
UGORETTI IRISARRI: Sasihlaba umxhwele ngombono wokubeka umlingiswa ophikisayo ephila kakhulu kulesi sitimela esisheshayo, isithombe se-cinematic impela futhi sacabanga ngaso leso sikhathi Hitchcock, kulawo ma-movie oqala ukuwabona futhi awakuvumeli uhambe.
AL: Ungabuyela kuleyo ncwadi yokuqala oyifundile? Nendaba yokuqala oyibhalile?
GI: Endabeni yami ngiqale ngoTolkien, IHobbit, noma okungenani yincwadi yokuqala engiyikhumbulayo. Kwakufana nokuthola isidakamizwa futhi angizange ngiyeke.
I-JGR: Funda cishe incwadi ethile ye Abahlanu, udadewethu abazoba nayo eshalofini. Kepha ngaphandle kokungabaza lokho okuphawule ubuntwana bami, futhi ngingasho ukuthi impilo yami, kwakuyi indoda, nguCarlos Giménez lapho sinemininingwane. Futhi bhala ... impela iskripthi somunye walawo amahlaya engiwudwebe ngisakhula, okwakuyizindaba ezethusayo nezilo, ezazithonywe kakhulu yi njengabafokazi nguJames Cameron nangemiphumela ekhethekile yama-movie kaDavid Cronenberg.
AL: Umbhali oyinhloko? Ungakhetha ngaphezu kweyodwa nakuzo zonke izinkathi.
JGR: UGore ufundeka kakhulu kunami (ehleka). Kepha kuningi kakhulu ... UGarcía Márquez noGaldós, Horacio Quiroga noStefan igatsha, UPerez Reverte no-Eduardo Mendoza, UBukowski...
GI: Ngizophula umkhonto wamantombazane. Ngangifaka umlilo wami nganoma yini evela ku-Sei Shonagon, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, uSusan Sontag noma i-surfer edume kakhulu, Agatha Christie...
I-GI: Ngokuzimisela, u-Agatha wayeyi- iphayona le-surfKunezithombe zakhe ezipholile impela ngamabhodi abamba amagagasi.
AL: Yimuphi umlingiswa osencwadini obungathanda ukuhlangana naye futhi umakhe?
JGR: Bengingathanda ukuhlangana ne- umfokazi ufunani Umdlandla.
I-GI: Umbuzo omuhle kanjani! Hhayi bengizothanda dala ku- okungaqondakali kakhulu umphathi we Okunye ukusonteka. Kepha ukwazi ... kukaputeni nemo, nokuthi wangithatha ukuvakasha okuncane kwezansi kwesiziba somfula iVigo, okusobala ukuthi kwakulapho.
AL: Yimiphi imikhuba noma imikhuba ekhethekile uma kukhulunywa ngokubhala noma ukufunda?
I-GI: Ngaphambi kokuthayipha useshe izithombe. Ukuze ngifike endaweni entsha ngidinga ukubona izithombe ngibeke kumongo, imibono yokugqoka ehlekisayo, ubuso obuthile.
I-JGR: Ukufunda, akukho okuza emqondweni njengamanje ... futhi bheka, ngiyisidididi! Yebo, bheka: Imvamisa ngithenga amasekeni amaningi, Angikwazi ukubekezelela ukuthola omunye umuntu edwebela encwadini. Amehlo ami aya kulezo zigaba omunye azithola zithakazelisa futhi ziyangiphazamisa, ziyangiphazamisa. Ngathi, i-maniac (ehleka).
AL: Futhi leyo ndawo nesikhathi esincanyelwe ukukwenza?
I-JGR: Ukufunda, ngokungangabazeki ngaphambi kokulalaku embhedeni.
I-GI: Nginokunambitheka okusontekile kokufunda lapho kunomsindo omkhulu, njengomgwaqo ongaphansi komhlaba. Ngiyakuthanda ukuhlushwa okungiphoqayo, ngizicwilisa kakhulu.
AL: Zikhona ezinye izinhlobo ozithandayo?
I-GI: Ngikuthanda kakhulu lokho okubizwa izincwadi uhlobo, kokubili ukufunda nokubhala. Ukubhala kuhle ukuthi kukhona imithetho ekuvalela, imikhawulo efana naleyo echaza uhlobo. Ngokudala kusebenza kangcono kakhulu. Kukhona idokhumentari kaLars von Trier, Izimo ezinhlanu, okuchaza kahle kakhulu: UVon Trier uphonsela inselelo umbhali wefilimu emfushane ukuthi ashuthe amahlanu remakes yesikhashana sayo, futhi ngaso sonke isikhathi izobe ibeka isimo esinzima, esingenakwenzeka. Kepha into esabekayo impela lapho uLars Von Trier emtshela ukuthi kulokhu akabeki mibandela kuso: ushiya umbhali ompofu engavikelekile ngaphambi kwalasha, inkululeko ephelele.
I-JGR: Izinhlobo eziningi nezinhlobonhlobo, kepha… yebo, enye indlela yokuzilibazisa: Ngangifunda izincwadi okungezona ezaseSpain. Kungenza ngibe novalo ukucabanga ukuthi ukuhumusha engikufundayo kuzobe kungaphelele nokuthi lokhu kuzokona ukufunda kwami. Kungumcabango we-neurotic kakhulu, ngiyazi, futhi benginokuzijabulisa okuningi ukukubeka kumlingiswa ovela Umhumushi, ethi okuthile okufana "Angilithembi ikhwalithi yokuhumusha engizokuthola."
AL: Ufundani manje? Futhi ukubhala?
GI: Ngiyafunda Umzila ongokomzwelo weMadrid, of UCarrere, ishicilelwe kabusha nguLa Felguera. U-Emilio Carrere, umbhali we Umbhoshongo wokuzingela okuyisikhombisa, Wayengumlingiswa owehluke kakhulu, imbongi eyadicilela phansi futhi ene-bohemian, okwathi ngemuva kwempi yamukela umbuso kaFranco. Ungomunye walabo literati abanemibono okungelula ukuyibhala. Vuliwe Umhumushi uphuma efunda inkondlo emsakazweni, lapho ayedume khona. Le nkondlo iyindumiso kumaNazi angena eParis, IParis ngaphansi kweswastika.
Sasinesithakazelo esikhulu ekuboniseni leso sikhala sangaleso sikhathi, lapho konke kwakungacaci njengamanje futhi kunongqondongqondo ababethanda ubuNazi. Isibonelo, kwakukhona umbukiso omkhulu eCírculo de Bellas Artes encwadini yamaJalimane, nayo evela kule noveli. Noma kunjalo, kukhona lezo zithombe ezinama-swastika amakhulu alenga ezindongeni ze-Circle ... Indaba ukuthi iyini.
JGR: Ngiyafunda Iqhawe elinobuso obuyinkulungwanenguCampbell. Ngikuthanda kakhulu ukuprakthiza. Ngifunde okuningi ngezinqubo zokulandisa nokunye, ukubona ukuthi ngifunda okuncane (kuyahleka)
Mayelana nalokho esikubhalayo, sisanda kuqeda inoveli futhi sanelisekile kakhulu. Sethemba ukuthi singanikeza izindaba ngokushicilelwa kwayo, kungekudala.
KUYA KU: Ucabanga ukuthi isimo sokushicilela sinjani? Ngabe ucabanga ukuthi kuzoshintsha noma sekwenzile vele ngamafomethi amasha wokudala laphaya?
JGR: Yebo, ngingasho kangcono kunakuqala futhi ngingasho okubi kunanini ngaphambili. Ngiqonde ukuthi ishicilelwe kakhulu, kakhulu, kepha ngaphansi kwezimo ezinzima: Izikhathi zokuxhashazwa zifushane ngokwedlulele futhi ukuncintisana kuyesabeka. Kunabantu abaningi abahle ababhala izincwadi ezinhle futhi umfundi akanaso isikhathi namandla okuzikhetha. Iningi labenzi bokubi liyanyamalala endleleni noma lingaze lifike. Futhi kuyamangaza ukucabanga ukuthi bangaki abantu abanamakhono abakhona laphaya, abachitha.
I-GI: Nami ngiyacabanga indlela entsha yezinganekwane ezilalelwayo nokubukwayo inesisindo esikhulu, ikakhulukazi uchungechunge lwethelevishini, esezabhalwa kakhulu futhi zinakekela kakhulu ukukhula kwabalingiswa noma ukuhlola izindaba. Futhi bayi- ukuncintisana okuqinile, ngoba isikhathi osichitha ubuka izahluko nezahluko zochungechunge awusichithi ekufundeni.
AL: Ngabe isikhathi senhlekelele esibhekene naso sinzima kuwe noma uzokwazi ukugcina okuthile okuhle ngezindaba ezizayo?
JGR: Lezi yizikhathi ezinzima. Baningi abantu abahluphekayo noma abahluphekile. PNgokwethu, singaletha kuphela ukukhululeka okuthile, indlela encane yokuphuma kulokho kuhlupheka. Okunye kwalokhu kukhulunywa ngakho ku- Umhumushi futhi: kusuka ku- indlela yensindiso izincwadi ezicabanga ukuthi zenzelwe abantu futhi, ngalowo mqondo, inoveli iyisipho semibhalo yezincwadi. Ngiyethemba, noma isikhashana, abafundi bethu bazosinda ngenxa yethu. Lokho kungaba kuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » UGoretti Irisarri noJose Gil Romero. Ukuxoxisana nabalobi beLa traductora
UJosé Javier Abasolo. Ingxoxo nombhali we-Original Version
Ungayibhala kanjani inkondlo